Sababta Axmed M. Fiqi uga haray tartanka HOP#038 | KEYDMEDIA ENGLISH
Sababta Axmed M. Fiqi uga haray tartanka HOP#038
Axmed Macallin Fiqi, wuxuu beelaha kursiga leh, ugu baaqay, in afarta sano ee soo socota ay kursiga HOP#038, u doortaan qof si sharaf leh ku matala, ilaalinaya magacooda, isla markaana qeyb ka noqda dabaysha isbedelka ee dalka ka socota.
KAALGACYO, Soomaaliya – Wasiirkii hore ee Amniga Galmudug, Axmed Macallin Fiqi, ayaa ugu danbeyn si buuxda ugu dhawaaqay, in uusan u tartami doonin, kursiga tirsigiisu yahay HOP#038, kaas oo baarlmaankii 10-ad uu ku matalayay beesha Cabdalla Sacad.
Xildhibaan Fiqi, oo ka mid ah shaqsiyaadka saameynta leh, ee sida weyn uga soo hor jeeda Madaxweynaha Galmudug, Axmed Qoorqoor, ayaa sheegay inuu naftiisa u quuri waayay inuu hoos fariisiyo ‘geed dullinomo’ oo uu ula jeedo, wax u doonashada taliska Qoorqoor.
Fiqi, wuxuu xusay, ‘in siyaasaddu aysan ahayn oo kaliya barlamaanka oo xubin laga noqdo’, balse, ay furan yihiin waddooyin kale, uu loogu shaqeyn karo umadda, wuxuuna u mahad celiyay dadkii iyo deegaankii uu matalayay shanti sano ee la soo dhaafay.
Wuxuu kursigaasi ahaa mid tilmaaman, lagu matalayey aqoon, aragti siyaasadeed oo xor ah iyo dulqaad, waxaana ka mid ahaa xildhibaanadii fara ku tiriska ahaa ee kaligitaliska tooshka ku ifiyay inta uusan ficilooyinkiisii gurracnaa la soo bixin. Ayuu yiri Fiqi.
Taliyihii hore ee Nabadsugidda Gobolka Banaadir, Axmed Fiqi, wuxuu ugu horreeyay siyaasiyiin ay is qabteen, Qoorqoor, kuwaas oo banneeyay xilal ay ka hayeen Galmudug, waana sababta ugu weyn ee uu uga haray baratanka HOP#038.
Kursigaan, waxaa sidoo kale, saameyn ku yeeshay, kursiga Aqalka Sare ee beesha deggan Koofurta gobolka Mudug, [Sacad] waxaana warar xan ah sheegayaan, in Qoorqoor si gaar ah ugu xiray MW hore, Axmed Ducaale Xaaf, oo wiil uu adeer u yahay dhisaya.
Xaaf, wuxuu ka mid ahaa, siyaasiyiin miisan culus, oo u tartamay, Aqalka Sare, hayeeshee, ugu danbeyn lagu qanciyay inuu qaato kursiga Golaha Shacabka, ama qof keensado, waana sababta ugu weyn ee keentay iske dhaca Qoorqoor iyo Fiqi.
Fiqi, wuxuu ka mid yahay xisbiga uu hoggaamiyo, Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud, kaas, oo Qoorqoor, ka hor istaagay in ay soo laabtaan xildhibaanno isaga taabacsan oo intooda badan ka soo jeeda koofurta gobolka Galgaduud.
Wasiirkii hore ee Amniga Galmudug, wuxuu ugu horreeyay shaqsiyaad, fara ku tiris ah, oo si buuxda uga soo baxay matalaadda baarlamaankii 10-aad, waxaana lagu xasuustaa, ka hadalka qaddiyadda qarannimo, mid degaan doorasho iyo u doodidda dadkii uu sida gaarka ah u matalayay.